version 0.3.4 – ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
နိုဝင်ဘာလ 5, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ဒီဗားရှင်းအချို့ချွတ်ယွင်းချက်များပြင်ဆင်, အဓိကအားဖြင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား NexGEN ပြခန်း bug ကို (အလားတူနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအခြားသော plugins အဘို့အဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်အရာ). တချို့ကစွမ်းဆောင်ရည်အပြောင်းအလဲပါဝင်သည်, အဓိကအားဖြင့် MSN ကိုဘာသာပြန်ဆိုသူသုံးပြီးလူများအတွက် (သငျသညျသူတို့ support ဘာသာစကားများအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်သတိထားမိခဲ့ပါ?)
ကျနော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ချထားကြောင်းအသစ်တည်ဆောက်သည့်စနစ်အမှန်တကယ်ကလာမည့်ဗားရှင်းဖြန့်ချိဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်, သူတို့ source code ကို repository ကိုနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းထားပါလိမ့်မယ်ကြောင်း.
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နေသောအကြောင်းပိုမိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်လမ်းညွန်ကိုသိလိုလျှင်, ကနေမာကို ဘလော့အတှငျးရှိနည်းပညာ တစ်ခုကောက်ယူကြပါပြီ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Ofer Wald နှင့်အတူ. စိတ်ဝင်စားမယ့်အကြှနျုပျတို့သညျစိတျရှညျနဲ့ Hard အလုပ်အတွက်မာကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်သူမည်သူမဆိုများအတွက်ဖတ်နေ၏ nice အပိုင်းအစ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin